တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘက်ရှင်းအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများရဲ့ မြန်… – PVTV Myanmar
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘက်ရှင်းအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အားပေးစာတွေကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Like – 5.2K Share – 207
2021-06-23 at 9:00 PM
ေႏြဦး ယပ္ေတာင္ says:
2021-06-23 at 9:10 PM
Thank for all. I remember korea .never forget your help.
Hein Hteț says:
2021-06-23 at 9:24 PM
Thanksalot South Korea’s students as stand with Myanmar People.
2021-06-23 at 9:41 PM
2021-06-23 at 9:47 PM
ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအား အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
2021-06-23 at 10:56 PM
Sai Tae says:
2021-06-24 at 12:23 AM
Cho Gyi says:
2021-06-24 at 2:22 AM
အားပေးစာလေးတွေဖတ်လိုက် ရှံု့ချသာလေးတွေဖတ်လိုက်လုပ်နေ မအလက ခင်များတို့ပြောတဲ့ D day အတွက်ပါကျိုတင်ပြင်စင်နေတာမြင်လားရုရှားသွားတာ အဲဒီအတွက်အဓိကပဲ
Lei Thinthin says:
2021-06-24 at 10:43 AM
2021-06-24 at 9:18 PM
We want Justice. We support NUG
Nay Chi Cooky says:
2021-06-25 at 1:19 AM
Thanks for all ,we never forget your appreciation 💗we never give up ,I Love 🇰🇷
အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်အပါအဝင် သံရုံးများက မန္တလေးမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ…